Taariikhda My Butros » 5 Waalli (Laakiin True) Waxyaabaha ku saabsan Waxaad Dating Baahan Tahay Inaad Ogaato!
5 Waalli (Laakiin True) Waxyaabaha ku saabsan Waxaad Dating Baahan Tahay Inaad Ogaato!
Waxay noqon kartaa wax aad u xiiso badan marka aad sameysid xoogaa baadhis ah oo u ogaato wax Weligay idinma aqoon ku saabsan adduunyo of shukaansi. Qaar ka mid ah xaqiiqooyinka waxaad ka akhrisan caawin kartaa sababta aad u hesho furaha guriga ama waraaqo casumaada arooska ah halka kuwo kalena la dagaalamaya karaa ama xitaa kaliya xiiso leh. Dib u fadhiiso, raaxaysan oo la yaabay shan xaqiiqooyinka shukaansi kuwaas!
Romances Goobta ma aha oo keliya Jidka A Si maalintu u dhaafin!
Xiriirka ayaa asal ahaan xiriirka goobta shaqada si lama filaan ah waxay leeyihiin xaddi aad u sarreeya guul leh oo ku saabsan 40% shaqada romances ku dhamaatay guurka taas oo la yaab leh in dareenka halkaas dad badan oo halkii aan ku noolayn lahaa in qof walba’ Qaybo ka mid ah jidkaas laakiin waqti isku mid ma aha oo gebi ahaanba la yaab leh. Waxa aad sameyn Waxaa dhici karta inaad u jeclaataa. Waxaa laga yaabaa sidoo kale si aad horey u wax caadi ah marka la midba midka kale iyo aad waqti badan ku wada haddii uu jiro soo jiidashada ah labada dhinac waxaa jira fursad wanaagsan waxay u badan tahay kori doono jacaylka.
Samee-Up ka caawiyaa!
Stats TLC iyo Chemistry.com ee la soo dhaafay ayaa muujisay in dumar ah ee baar lagu kor MySpace doonaa celcelis ahaan lix daqiiqo ka badan dhakhso haddii ay ku xiran ka-soo-. Waxaan qabaa inta badan haddii qof ayaa jantay inuu qof oo ay ku jiraan xoogaa weeraryahanka ama chatty si kasta oo ay aad sheekaysan doonaa laakiin in isagoo sheegay in aan u malaynayaa in kaa caawin kara. Waxaad dabooli kartaa ilaa ceebaalowyo iyo dareemaan diyaar si aad u qaado koobka adduunka. Haddii ay tahay kalsooni in ama xaqiiqada ah baro aad ha u tusto inaad helo qofka aad rabto in aad u furan yahay ka doodista!
ABC sheegay in khiyaali ugu badan ee galmada waa galmo ka baxsan ee 57% halka 14% ayaa lahaa imaado a iyo 21% iyaga ka mid ah ayaa u maleeyay oo ku saabsan. In ka yar shan meelood loo sheegay in ay khiyaameen ku lamaanan, laakiin qiyaas ahaan saddex meelood oo iyaga ka mid ah ayaa fantasized ku saabsan qishka. In ka badan nus ka mid ah dadka Maraykanka ay sheegeen in ay u furan yihiin oo uu kala hadlo himilooyin khayaali ah, kuwaas oo la-hawlgalayaasha ay. Waxaan qabaa, inay fiican tahay in dad sidaas u badani furan la wadaagto kala hadlaan waxa galmada iyaga jeceshahay laakiin waxaan qabaa waa in ay I heeysan dhabarka “Waxaan fantasized ku saabsan qishaan aad farxo.” line!
Saddex ma aha dad!
Qof u aragtaa wax adag in ay weeraraan wada-hadal xaflad bulsho haddii ay jiraan laba saaxiibo wada taagan oo ay soo jiidatay inay mid ka mid ah. Ma doonayaan saaxiib kale inay dareemaan ka tageen kuwii saaxiib. Sidaas qof in gaar ah haddii aad raadinayso in ay hesho laba saaxiibo qaado!
Washington New York iyo haystaan ​​ugu dadka degan gobolka kuwa aan guursan. Hore waa 50% iyo ugu dambaysta yahay 70% si aad u hesho in ka badan in ay Washington New York iyo inuu soo jiito! Marka la eego dalalka boqolkiba guurka sare jirto Idaho iyo Utah ee 60% iyo 59%.